China Fifandraisana sy fitaovana elektronika fampiharana orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Yongjie
Firaka sy hatezerana lehibe:
Fampiharana: finday / solosaina finday, semiconductor / puce, tobin'ny base 5G
Ny takelaka aliminioma anodized dia voahosotra, ary misy sosona oksida aluminium manify miforona eo amboniny, ny hateviny dia 5-20 microns, ary ny sarimihetsika oxide anoda mafy dia mety hahatratra 60-200 microns.
Firaka aliminioma: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3005, 5005, 5052
Mampiavaka ny alimika Anodized:
1. Ny hatsarana sy ny fanoherana ny takelaka vita amin'ny alim-by dia miha-250-500 kg / mm2.
2. Fiatrehana hafanana tsara, ny haavon'ny fihenan'ny horonantsary oksida mafy dia lehibe hatramin'ny 2320K.
3. Insulated tena tsara, mahazaka malefaka mihena hatramin'ny 2000V.
4. Nihatsara ny fampisehoana fanoherana ny harafesina ary tsy hihoatra ny spray = 0,03NaCl spray mandritra ny adiny an'arivony maro.
5. Ny vokany fandokoana dia tsara. Misy mikrospore marobe ao anaty horonantsary oksida manify, izay afaka mifoka diloilo isan-karazany, izay mety amin'ny famokarana varingarina maotera na faritra tsy mahazaka akanjo hafa; ny sarimihetsika dia manana fahaizan'ny adsorption matanjaka ary afaka miloko amin'ny loko mahafinaritra sy tsara tarehy isan-karazany.
5052 alumina board ho an'ny akorany vokatra elektronika:
Ny takelaka aluminium 5052 dia matetika apetaka amin'ny akoran'ny vokatra 3C, manana ireto tombony manaraka ireto izy, araho ny Yongjie hijerena.
Tombony: 5052 takelaka aliminioma dia ambany hakitroka, fanaparitahana hafanana tsara, henjana tsara, fampiasana maharitra, tsy mora simba, fanoherana ny harafesina, miloko tsara, mora loko, ary azo ovaina loko isan-karazany amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitsaboana eto ambonin'ny tany hanisy famirapiratana amin'ny vokatra elektronika. Ny hakitrin'ny ambany ihany koa dia mahatonga ny vokatra elektronika hitondra, maro ny vokatra solosaina kahie no mampiasa ny haitao alim-by alimika manezioma.
Ny takelaka alimina misy oksizenina dia ampiasaina amin'ny fitaterana an-dalamby, fiara fitateram-bahoaka, fitaterana an-tsambo, fitaovana elektronika, lasitra fananganana sy injeniera sns.
Previous: Fitaovana fampiharana angovo vaovao
Manaraka: Fitaovana fampiharana maivana ho an'ny fiara
Taratasy elektronika elektronika
Volavola Capacitor elektronika